ဂျေရုဆလင်သို့ သံရုံးပြောင်းရွှေ့ရေးအတွက် အစ္စရေးက နိုင်ငံ ၁ဝ နိုင်ငံနှင့်တွေ့ဆုံ - Yangon Media Group
ဂျေရုဆလင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဂျေရုဆလင်ကို အစ္စရေးမြို့တော် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီးနောက်၊ အစ္စရေးက နိုင်ငံ ၁ဝ နိုင်ငံကို ဂျေရုဆလင်သို့ ၎င်းတို့၏သံရုံးများရွှေ့ပြောင်းရန် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီးတစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်ကြောင်း AFP သတင်းက ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။ မိမိတို့ နိုင်ငံ ၁ဝ နိုင်ငံနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း၊ အများစုမှာ ဥရောပမှဖြစ်ကြောင်း၊ သံရုံးရွှေ့ရန် ကိစ္စကိုပြောခဲ့ကြောင်း ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တစ်ပီဟိုတို ဗေလီက လူထုအသံလွှင့်ဌာနကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂွါတီမာလာက ၎င်း၏သံရုံးကို ဂျေရုဆလင်သို့ရွှေ့မည်ဟုပြော ကြားပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် သူမက ဤသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ရပ်အား ပါလက်စတိုင်းတာဝန်ရှိသူများက ရှက်စရာအလုပ်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ဟိုတိုဗေလီက သမ္မတထရန့်၏ ကြေညာချက်မှာ ဤသို့သံရုံး ရွှေ့ပြောင်းမည့်လှိုင်းဂယက်ကိုဖြစ် ပေါ်စေခဲ့သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ယခုမိမိတို့စတင်ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့် တွေ့ကြုံနေရပြီဟုလည်း သူမကဆိုခဲ့သည်။ ဟိုတိုဗေလီက သံရုံးရွှေ့ ပြောင်းမည့်နိုင်ငံများ၏ အမည်စာရင်းကိုမူ ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ သို့ရာတွင် ဂျေရုဆလင်သို့ သံရုံးပြောင်းရွှေ့မည့်နိုင်ငံများတွင် ဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ရိုမေးနီး ယားနှင့် တောင်ဆူဒန်တို့ပါဝင်မည် ဟု ရေဒီယိုကကြေညာခဲ့သည်။
ကြာသပတေးနေ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံက ထရန့် ၏ဂျေရုဆလင်အား အစ္စရေးနိုင်ငံ၏မြို့တော်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခြင်းအပေါ်သုံးပုံနှစ်ပုံက ငြင်းပယ်ခဲ့ကြပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အစ္စရေးသည် ၁၉၆၇ ခုနှစ် ခြောက်ရက်စစ်ပွဲကတည်းက အရှေ့ ဂျေရုဆလင်ကို သိမ်းပိုက်ထားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တင်အမေရိက အဓိကနိုင်ငံတချို့က ဂျေရုဆလင် တွင်သံရုံးထားခဲ့ကြသည်။ ထရန့်၏ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် ကြေညာချက်အပေါ် ပါလက်စတိုင်း တို့က ဒေါသထွက်ခဲ့ကြသည်။ အစ္စရေးက ဂျေရုဆလင်တစ်ခုလုံး ကို မြို့တော်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး၊ ပါလက်စတိုင်းတို့ကလည်း ၎င်းတို့ မြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုသည်။
သံဃာတစ်ပါးကို ရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လမင်းသာ (၂) ဆိုင်အပါအဝင် စားသောက်ဆိုင် ၁၃ ဆိုင် အခ??
အစိုးရသစ် သက်တမ်း နှစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာနှင့် နိုင်ငံခြားသား စုစုပေါင်း ၆၈ဝ ကျော်ကို အမည်မည
ပါတီကောင်းမှ အရည်အသွေးရှိသည့် ပါတီဖြစ်မှ အစိုးရကောင်းတစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်သည်??
ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့် ထိုင်းစားကုန်ပစ္စည်းများ မြဝတီ ဘုရင့်နောင်ဈေးကြီးတွင် အရောင်းထိုင်း
အီဂျစ် အက်ဖ်အေနှင့် ဆာလက်တို့ အကြား တင်းမာမှု ပိုမိုပြင်းထန်လာ၊ မည်သည့် ကစားသမားမှ အထူးအခွင
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် BPI ဆေးဝါးစက်ရုံ၊ တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာနှင့် ရန်ကုန်မြို့ပတ်မ?